ကော်မ္မရိုဇ့်ကျွန်းလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကကော်မ္မရိုဇ့်ကျွန်းများလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေအားလုံး၏နိုင်ငံခြားသားများပြည့်စုံအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အတွက်ကော်မ္မရိုဇ့်ကျွန်းများ၏အပြင်ဘက်ထုတ်ပေးနေသည်ပေးထားပါတယ်။ ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုနှင့်ပိုမိုထိန်းချုပ်ဘို့တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင် / မန်နေဂျာကိုလည်းအပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံခြားသားတွေကသူတို့ LLC အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးလို့ရတယ်။
အဆိုပါကော်မ္မရိုဇ့်ကျွန်းများအာဖရိကကမ်းခြေအနီးတွင်မိုဇမ်ဘစ်နဲ့ဒါဂတ်စကာများအကြားတည်ရှိသည်။ ဂရန်း Comore, Moheli နှင့် Anjouan: ကော်မ္မရိုဇ့်သမ္မတနိုင်ငံသုံးကျွန်းများပါဝင်သည်။
အလယ်ခေတ်ကတည်းကအစ္စလာမ်ဘာသာကျွန်းများကြီးစိုး။ ပြင်သစ် 1841 တစ်ကိုလိုနီတည်ထောင်ခဲ့သည်။ 1900 ရဲ့အစောပိုင်းများတွင်ကျွန်းများပြင်သစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ဒါဂတ်စကာ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိကြ၏။
အဆိုပါလူဦးရေလွှမ်းမိုးသောဆွန်နီမွတ်စလင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသုံးတာဝန်ရှိသူတဦးကဘာသာစကားများဖြစ်ကြသည်: အာရဗစ်, ပြင်သစ်, နှင့် Shikomoro (အာရဗီနှင့်ဆွာဟီလီရောစပ်) ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ပြင်သစ်ထံမှ 1975 အတွက်ရရှိခဲ့ခဲ့သည်။ အသစ်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အတူကော်မ္မရိုဇ့်ပြည်ထောင်စု 2001 အတွက်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏ဥပဒေရေးရာစနစ်သည်ပြင်သစ်မြို့ပြ 1975 ၏ကျင့်ထုံးများနှင့်အစ္စလာမ့်ပညတ်တိအကြားရောနှောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့တရားစီရင်ရေးဟာအဖြစ်များသည့်တရားရေးတရားရုံးနှင့်အနုညာတစီရင်သည်။
အထွေထွေကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေအားလုံးပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအုပ်ချုပ်။ သို့သော်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားအဖွဲ့များဥပဒေဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးအရဥပဒေများကိုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖန်ဆင်းသော 2014 အတွက်အကျိုးသက်ရောက်သို့သွားလေ၏။ 2014 ကတည်းကကုမ္ပဏီများသည်တစ်ဦးတည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီများနှင့်မိတ်ဖက်အဖြစ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကကော်မ္မရိုဇ့်ကျွန်းများလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိသွား:
• လုံးဝနိုင်ငံခြားရေးရှယ်ယာရှင်များမှာ: နိုင်ငံခြားသားများ LLC သည်ရဲ့ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• အပြီးအစီးအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်: နေသမျှကာလပတ်လုံးဝင်ငွေအားလုံး၎င်း၏နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်ထုတ်ပေးအဖြစ်မရှိ, ကော်ပိုရိတ်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေအခွန်ချမှတ်ထားပါသည်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းလူတိုင်းကသူတို့အစိုးရရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: ရှယ်ယာရှင်များ '' အမည်များကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ပေါ်လာဘူး။
• အနိမ့်နိမ့်မြို့တော်: လောလောဆယ်ရှယ်ယာမြို့တော်အခွင့်အာဏာနိမ့်ဆုံး $ 1,763 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များနှင့်တစ်ခုမှာ Manager က: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တမန်နေဂျာနှစ်ဦးစလုံး သာ. ကြီးမြတ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တူညီတဲ့လူတစ်ဦးနိုင်ပါတယ်ရှိရာ LLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည်။
ကော်မ္မရိုဇ့်ကျွန်းများလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အမည်
LLC သည်ကော်မ္မရိုဇ့်ကျွန်းများအတွက်အခြားမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း entity name ကိုကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီအမည်အားရွေးချယ်ရပါမည်။ တစ်ဦးအဆိုပြုကုမ္ပဏီအမည်ကို၏ verification အခမဲ့အစိုးရက Registry ကိုမှရရှိသောနိုင်ပါသည်။
ပြင်သစ်သည်၎င်း၏သုံးတာဝန်ရှိသူတဦးကဘာသာစကားများတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းက LLC ရဲ့အမည်စကားလုံးများကိုသို့မဟုတ် English တစ်ဦး "လီမိတက်တာဝန်နှင့်အတူ Society က" ဆိုလိုတာကသူ့ရဲ့အတိုကောက် "SARL" "ResponsabilitéLimitéeà Societe" နဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
အသင်းကုမ္ပဏီ၏ဆောင်းပါးများတစ် notarized မိတ္တူဟာ Registry နှင့်အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ file ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တရားရုံးတွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းများ file ။ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုလိုအပ်လိမ့်မည်:
• Office ကိုငှားရမ်းသဘောတူညီချက်;
• Manager ကိုဖွင့်ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းများစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာကို။
တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးအနည်းဆုံး LLC သည်ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များအတွက်ကော်မ္မရိုဇ့်နေထိုင်ရန်နှင့်၎င်းတို့သည်မည်သည့်တိုင်းပြည်နှင့်အတူနိုင်ငံသားရှိသည်နိုင်ကြပါဘူး။
အနည်းဆုံးမန်နေဂျာ LLC သည်ဖွဲ့စည်းခန့်အပ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါမန်နေဂျာအခြေစိုက်သဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံကနေနိုင်ငံသားအဖြစ်နှင့်အတူမည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး LLC အဘို့အနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော် 750,000 KMF ($ 1,763 ဇူလိုင်လ, 2017 ၏အဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါကော်မ္မရိုဇ့်ကျွန်းများအခွန်ကောက်ခံမှုစနစ်သည်ပြင်သစ်အပေါ်အခြေခံသည်။ အထွေထွေအခွန် Code ကိုကော်မ္မရိုဇ့်အရင်းအမြစ်ဝင်ငွေအပေါ်တစ်ဦး 35% ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုများအတွက်ပေးပါသည်။ ထက်ပိုမို 500 သန်း KMF ဝင်ငွေကုမ္ပဏီများတစ် 50% နှုန်းကိုပေးဆောင်။
သို့သော်နိုင်ငံခြားအရင်းအမြစ်ဝင်ငွေအခွန်ကောက်မပေးပါ။ ထို့ကြောင့်, LLC ရဲ့အဘယ်သူ၏တစ်ဦးတည်းသောဝင်ငွေသတင်းရင်းမြစ်ကော်မ္မရိုဇ့်ကျွန်းများ၏အပြင်ဘက်မှမဆိုအခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။
တိုင်းပြည်တွင်းကုမ္ပဏီအခွန်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်အခွန်ပြန်လာ Files များအတွက်အခွန်ဝိသေသလက္ခဏာအရေအတွက်ကခံယူနိုင်ရန်အတွက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
နှစ်စဉ်အခွန်ပြန်အားလုံးဝင်ငွေမှ လာ. နှင့်မျှမအခွန်အခများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာအတည်ပြုနှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးကြေညာချက်နှင့်အတူလိုအပ်သည်။ ယင်းကော်မ္မရိုဇ့်ကျွန်းများတစ်နယ်မြေအခွန်ကိုအခြေခံပြီးတိုင်းပြည်များမှာကတည်းက၎င်း၏နယ်နိမိတ်အတွင်းထုတ်ပေးမှသာဝင်ငွေကော်ပိုရိတ်များနှင့်ဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
မန်နေဂျာများ '' အမည်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို၎င်းတို့၏အမည်များကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာအစိုးရကနှင့်အတူယနေ့အထိတင်သွင်းခြင်းနှင့်ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ခုတည်းသောမန်နေဂျာနိမ့်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်များနှင့်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်နိုင်သူမရှိ, အခွန်, နိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောပိုင်ဆိုင်မှု, privacy ကို, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ကော်မ္မရိုဇ့်ကျွန်းများလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျ။